Mubiki waCastamar, eroticism, hunyengeri uye kufungira zvisizvo | Zvazvino Zvinyorwa
Mubiki waCastamar inoverengeka nemunyori wechiSpanish Fernando J. Múñez. Yakaburitswa mu2019, inyaya yakaiswa mune inodzvinyirira mamiriro ezana ramakore rechiXNUMX nzanga yeSpain pasi pekutonga kwaFelipe V. Iyi inyaya yechinyakare yakazadzwa neeroticism, anonyengera ezvematongerwo enyika, kufungira zvisizvo uye maitiro ekuchengetedza anoteedzana enguva iyoyo.
Kana iyo nyaya iri kushayikwa murudo rwakarambidzwa, hunyengeri uye ushingi hwevashoma vakatsunga kupandukira chinzvimbo chiripo. Naizvozvo, zita iri rine zvese "zvinoshandiswa" zvekuverenga kunonakidza uye kunonakidza. Pamusoro pe, Iri zita rinomiririra kukwakuka kwechikadzi kwakakosha kune munyori anonyanya kuzivikanwa nemabhuku ake evana kana vechidiki.
1 Nezve munyori, Fernando J. Múñez
1.1 Mabhuku naFernando J. Múñez
1.2 Iyo nhepfenyuro yeterevhizheni La cocinera de Castamar
2 Kupokana kubva kuCastamar's Cook
3 Kuongorora uye pfupiso
3.2 Iwo makodhi uye izvo zvimiro
3.3 Iye Duke
3.4 Nzanga inotsamwa uye inodzvinyirirwa
Nezve munyori, Fernando J. Múñez
Akazvarwa muMadrid muna 1972. Ane degree muFilosofi, kunyangwe mabasa ake ekutanga aive munyika yekushambadzira uye mukugadzira mafirimu mafupi. Uyezve, akapedza kuraira kwake muCinematography kuUS Muna 2002 akatanga chirongwa Muparidzi yakazvipira- pakati pezvimwe zvinangwa- kukwezva nekutsigira vanyori vachiri kubuda.
Kubva ipapo, Múñez akapinda mukuburitswa kwemakumi mashanu evana nemazita evechidiki. Muna 2009 akatanga zvebasa rake semunyori na Monsters uye naka zvisikwa. Gare gare, akawana mukurumbira wakakosha munzvimbo yehunyanzvi yeSpain mushure mekuratidza firimu Nyanga (2012).
Mabhuku naFernando J. Múñez
Monsters uye naka zvisikwa (2009).
Varoyi nevaroyi (2011).
Imba yeMarmadú (2011).
Nyaya dzevana (2014).
Nyaya dzevasikana (2014).
Makore ekare (2014).
Mubiki waCastamar (2019).
Nhepfenyuro yeterevhizheni ye Mubiki waCastamar
Pakutanga kwaMay 2020, iyo Astresmedia chiteshi yakazivisa kuwanikwa kwekodzero dzoruzivo rwaMúñez. Zvinoenderana neruzivo rwepepanhau La Vanguardia, Michelle Jenner achange ari muganda raClara Belmonte (protagonist). Kunyangwe iko kugadzirwa kuchiri muchikamu chekukanda, kuratidzwa kwayo kwakarongerwa kudonha kwa2021.
Ehe saizvozvo, Nhau idzi dzakawedzera kufarira kukuru kweruzhinji mune iri basa. Nekudaro, chero chinangwa chekushambadzira hachidzikise pane zvakafanira kana mhando yenyaya yakawanikwa nemunyori weMadrid. Mushure mezvose, kupararira kwemabhuku muzera redhijitari kunotenderera marudzi ese emapuratifomu, kusanganisira mapodcast, midhiya yemagariro, uye nhepfenyuro enhau kumhanyira.
Kupokana kubva Mubiki waCastamar
Unogona kutenga bhuku pano: Mubiki waCastamar
Clara Belmonte musikana ane nhamo ane nhoroondo yakaoma. Kunyangwe akawana dzidzo yakanaka, anomanikidzwa kutsvaga basa nekuti baba vake vakafa muhondo. Kunze kwezvemamiriro ezvinhu ehupfumi anotevera, kufa kwababa vake kwakamusiya aine hunhu hunokosha hwepfungwa: agoraphobia. Naizvozvo, anotya nzvimbo dzakavhurika.
Mukutsvaga raramo, Clara anouya kuDuchy yeCastamar semukuru wekicheni. Ikoko, Don Diego, ishe wemumba, anopedza mazuva ake akanyudzwa mukusaitira hanya kusingaenzaniswi, akarasikirwa nemukadzi wake mutsaona makore gumi apfuura. Saka mubiki nemuchinda vanogadzira hukama hwakakosha kuburikidza nechikafu uye nemanzwiro apo chiitiko chiri mumanor chinotanga kusununguka.
Kuongorora uye pfupiso
On Gumiguru 10, 1720, Clara Belmonte akauya kuDuchy yeCastamar kuzoshanda semukuru wekicheni. Akapedza nzira yose kubva Madrid kumahombekombe eguta reBoadilla pasi pemamwe mabhero ehuswa uye asina kuvhura maziso ake. Aingoshinga kucheuka kana aine chokwadi chekuti aive akachengetedzwa nedenga.
Panguva ino, Chakavanzika chaMiss chinova pachena: anotambura neagoraphobia. Mukadzi wechidiki akatanga kushungurudzika mushure mekuziva nezvekufa kwababa vake muhondo. Rufu urwu rwakaita kuti mhuri yese yeBelmonte idonhe kubva munyasha. Caste kana kudzidziswa kwepfungwa kwakagamuchirwa pasi pekudzivirirwa nababa vake, avo vaive chiremba anozivikanwa munharaunda yeMadrid, zvaive zvisina basa.
Iwo makodhi uye izvo zvimiro
Neraki kumukadzi mudiki, akadzidza kubika kubva achiri mudiki uye kuti kutengeserana kwakava nzira yake yekutiza hurombo. Yakanga isiri nyaya diki yenguva iyoyo, nekuti panguva iyoyo vakadzi vaingova nesarudzo nhatu chete kuti vararame. Yekutanga (yakajairika) yaive yekugara pasi pekudzivirirwa kwechirume chimiro, ndiko kuti, kuve mukadzi wemurume, amai kana mwanasikana.
Yechipiri sarudzo yemukadzi wezana ramakore rechiXNUMX yaifanira kuva sista, akaroorwa kuna Mwari (kana mukushandira murume, nenzira inoshanda). Pakupedzisira, avo vasina rombo rakanaka vakamanikidzwa kupinda munyika yechipfambi uye, mune "akanakisa" ematare, vakaguma vava makosi. Kunze kwesarudzo nhatu dzataurwa, hapana chero mukadzi aigona kuzvitsigira.
Don Diego naClara zvishoma nezvishoma vakagadzira hukama hwakakosha kuburikidza nechikafu. Zvishoma nezvishoma, iyo gastronomic kubatana kwakatungamira kune iyo nzira kuburikidza nemamwe emabriji emanzwiro, zvichitungamira kuhunhu uye, pakupedzisira, kwakanyanya eroticism. Panguva imwecheteyo, muchinda uye nevamwe vagari veCastamar zvishoma nezvishoma vakaziva kuti aive munhu ane tsika.
Quote naFernando J. Múñez.
Zvino, mamiriro emhepo aDon Diego akabva pakusava nehanya nekunakidzwa kune kushingairira kwemumwe munhu akawanazve kunaka kwehupenyu. Zvisinei, Kunyengera, kusava nechokwadi, uye kufungirana zvakamuka semhedzisiro isingadzivisike. Nekuti chero "zvisina kufanira kutsvedza" muhupenyu hwemumiriri hunogona kushandiswa sechikonzero chekuzvidza humambo uye kushomeka chinzvimbo chake chezvematongerwo enyika.
Nzanga inotsamwa uye inodzvinyirirwa
Zviri pachena, kudanana pakati pashe fealal ishe ne "low caste" mukadzi kwaisagona kugamuchirwa panguva iyoyo. Zvakare, hukama hwakadai hwaionekwa sechibereko chekuchiva kwekutadza uye kunyange dzidziso dzakatsauka. Anenge nguva dzose - pasi pechiratidzo chakajeka chemaziso - vakadzi vakapomedzerwa "kuyedza" vatenzi vavo (vasina kufunga chokwadi chaicho).
Nezvikonzero izvi, Mubiki waCastamar inoratidzira zvakakwana yega yega yeanodzvinyirira mativi enzanga isingagone zvachose. Iri bhuku rine maonero akajeka echikadzi. Asi -mumashoko aMúñez iye- "haina kungoitirwa vakadzi chete, inoitirwa kuti varume vaverengewo, kuti vakadzi vaverenge, kuti marudzi ese evanhu averenge".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Novela » Mubiki waCastamar
D. Cassandra Fletcher, Ph.D. akadaro
Mwedzi miviri yapfuura, sisi vangu vakakurudzira kuchinjiswa kwenoveli iyi yeterevhizheni, iyo yakaburitswa paNetflix. Pakutanga, akateedzana haana kundifarira. Mavhiki mashoma apfuura, ndakafunga kuzvitarisa uye kuti ndinofara sei kuti ndakawana chigadzirwa chakamiririrwa nemhando yepamusoro yekutamba, iyo cinematography, kuzarurirwa zvishoma nezvishoma kwechirongwa, mufananidzo wenguva iyoyo muSpain. uye kuferefetwa kwemakakatanwa uye kupokana pakati pemakirasi, madzinza, gender uye masocial hierarchies aifanirwa kunge aripo panguva iyoyo.
Asi mifananidzo yevese vatambi (Duke Enrique de Alcona, Miss Amelia Castro, maDuchess Mercedes de Castamar, mukoma wake Gabriel de Castamar, chipangamazano waDon Diego mumunda, diaborosi Marchioness weVillamar nemurume wake Esteban, Rosalía, Francisco, Ignacio , Ursula Berenguer, Melquiardes, Beatriz, Carmen, Elisa, Roberto, Mambo nemhuri yake, Farinelli the countertenor ane mukurumbira, baba vaClara, uye kunyangwe matsotsi akapiwa nenzira dzechokwadi uye dzisingakanganwiki idzo ini dzandinoona mukufunga kwangu kwekufungidzira, kufungidzira. Ndiri kufara kuti ndakafunga kubvuma rairo iyi kubva kuna sisi vangu.
Ndiri American weAfrican American nhaka. Ndakaberekerwa uye ndakakurira muguta reWashington, DC. Pandakanga ndiine makore mashanu ekuberekwa, amai vangu vakandinyoresa kuita piano, tapoteo uye makirasi eSpanish. Ikoko kwakatanga kufarira kwangu kudzidza kweSpanish uye netsika dzenyika dzinotaura chiSpanish. Yangu nyaya ndeye yekuvavarira nesimba, kushanda nesimba, uye kukunda zvipingamupinyi kuti ndizadzise zvido zvangu. Uye saClara, ini ndakaona kuti hupenyu hune hunhu uye hunoshamisa.
Zvakandibata zvakanyanya Amelia paakaverengera Gabriel ndima dzakakurumbira dzemutambi wemitambo Calderón de la Barca: «Upenyu chii? Kupenga Chii chinonzi hupenyu? Kufungidzira, mumvuri, ngano; uye chikuru chakanakira chidiki; kuti hupenyu hwese kurota, uye zviroto zviroto. " Ndakadzidza "Hupenyu kurota" kuchikoro nemudzidzisi wangu mukuru wechiSpanish, Mai Guillermina Medrano vanobva kuSupervía. Valencian nekuzvarwa, angadai akadada nekuziva kuti akaziva uye achiri kukoshesa iyi nhetembo nehungwaru.
Zvidzidzo zvangu zvakandiendesa katatu kuSpain, iyo ichiri nyika yandinoda pakati pezvose zvandakashanyira muEurope, Caribbean, South America uye Middle East. Mwari vachitendera, ndinotarisira kudzoka zvakare. "Mubiki weCastamar" akonzera kupisa kwekusuwa kweSpain, uko kunogara kuchipisa mumoyo mangu, kumera mumoto wechishuwo.
Ndinovimba kuti rimwe zuva ndichawana nzira. Kusvika panguva iyoyo, ndinotumira makorokoto angu, kuvonga kwangu, kuyemura kwangu uye ruremekedzo rwangu kumunyori, kune vese vatambi, uye kunhengo yega yega yeboka rekugadzira izvo zvavakandipa - mukana wekunakidza chikafu chinonaka icho chiri «The mubiki weCastamar. »
Pindura kuna D. Cassandra Fletcher, Ph.D.
Alexis Ravelo: «Zvinyorwa zvinogona kukubatsira iwe kubvunza mibvunzo chaiyo nezve chokwadi»
Sean Connery. Eternal James Bond nevamwe vanyori vanyori